Otu esi eme okpokoro pivot na Excel na-enweghị nsogbu - Ntuziaka Teknụzụ | Nzukọ Ekwentị
Otu esi eme okpokoro pivot na Excel n'enweghi nsogbu
Ụlọ Ignatius | | Emelitere na 14/09/2020 12:05 | Microsoft Excel, Autlọ ọrụ akpaaka
Excel aghọwo, na nke aka ya, ngwa kachasị mma iji mepụta mpempe akwụkwọ nke ụdị ọ bụla, site na ndị na-enye anyị ohere ịme ajụjụ kwa ụbọchị nchekwa data metụtara nchekwa data, na mgbakwunye na ikwe ka anyị nọchite anya data ha gụnyere na eserese.
na wedaa ndepụta na tebụl dị ike nke Excel na-enye anyị ohere ịmepụta, bụ ọrụ abụọ anyị nwere ike iji rụọ ọrụ nweta ọtụtụ n'ime ya, nke ikpeazụ a bụ otu n'ime ọrụ kachasị ike nke ngwa a nyere nke dị n'ime Office 365.
1 Gịnị bụ tebụl dị mkpa
2 Otu esi emepụta tebụl dị mkpa
2.1 Hazie isi iyi data
2.2 Mepụta tebụl dị mkpa
3 Ndụmọdụ bara uru
Gịnị bụ tebụl dị mkpa
O yikarịrị ka ị nụtụrụla na tebụl karịrị otu oge, otu n'ime ha ọrụ bara uru ma dị ike nke Excel na-enye anyị ọ na-enye anyị ohere ijikwa ọtụtụ data ngwa ngwa na mfe.
Tebụl dị ike anyị nwere ike iji Excel mepụta, ọ bụghị naanị na-enye anyị ohere iwepu data sitere na tebụl, kamakwa na-enye anyị ohere wepụ data sitere na ọdụ data ejiri nweta Access, Ngwa Microsoft maka imepụta ọdụ data.
Esi eme ka ndepụta ndepụta na Excel
Ọ dị mma, mana gịnị bụ okpokoro isi? Tebụl dị iche iche dị ihe nzacha anyị nwere ike itinye na ọdụ data nke ahụ na-enyekwa anyị ohere ịme nchịkọta nke nsonaazụ. Ọ bụrụ n ’ị na-eji nzacha oge niile na mpempe akwụkwọ gị, ọ bụrụ na ị na-eji tebụl dị mkpa, ị ga - ahụ otu oge ị na - eji emekọrịta ihe na - ebelata.
Otu esi emepụta tebụl dị mkpa
Iji mepụta tebụl dị mkpa, anyị chọrọ isi mmalite data, isi iyi data nke nwere ike ibu akwukwo nke anyi n’eji eji echekwa data. Ọ bụrụ na anyị ejiri nchekwa data emepụtara na Access, anyị nwere ike ịtọ data isi na tebụl ebe echekwara ihe ndekọ niile.
Ọ bụrụ na isi mmalite data bụ faịlụ ederedeSite na data nkewapụrụ site na commas, anyị nwere ike ịmepụta site na faịlụ ahụ mpempe akwụkwọ iji wepụ data iji mepụta tebụl dị mkpa. Ọ bụrụ na ụdị faịlụ a dị larịị bụ naanị isi iyi nke faịlụ anyị nwere iji mepụta tebụl dị ike, anyị kwesịrị ịhụ ohere nke iwepụta data na usoro ọzọ ma ọ bụ mepụta macro nke na-akpaghị aka na-eche maka ịmepụta tebụl dị ike n'oge ọ bụla. anyị na-ebubata data ahụ.
Ọ bụ ezie na aha ya nwere ike ịpụta na ọ dị mgbagwoju anya, ọ dịghị ihe ọzọ site n'eziokwu. Mepụta tebụl dị mkpa ọ bụ usoro dị mfe, ma ọ bụrụ na anyị na-agbaso usoro niile anyị na-egosi n'okpuru.
Hazie isi iyi data
Ozugbo anyị mebere nchekwa data, anyị ga-ahazi ya nke ọma na Excel nwee ike ịmata nke bụ mkpụrụ ndụ nwere data na nke bụ mkpụrụ ndụ nwere aha ndekọ ndị anyị chọrọ nyocha iji mepụta tebụl dị ike.
Iji hazie tebụl, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịhọrọ sel niile bụ akụkụ nke okpokoro ma pịa bọtịnụ ahụ Hazie dị ka tebụl dị na rịbọnụ Homelọ.
A ga-egosi nhazi dị iche iche n'okpuru, nhazi nke na-abụghị naanị gbanwee aesthetics nke tebụl, mana gwa Excel na ọ bụ isi iyi data nwere ike. Na nkebi ahụ, ọ gbasaghị nhọrọ anyị họọrọ. Na ajụjụ Ebee ka data dị na tebụl? Anyị ga-elele igbe ndepụta ahụ nwere nkụnye eji isi mee.
N'ụzọ dị otú a, anyị na-egosi Excel na ahịrị mbụ nke tebụl na-anọchite aha data na tebụl, iji mepụta tebụl dị ike, nke ga-enye anyị ohere itinye ihe nzacha akpaghị aka. Ozugbo anyị nwere tebụl nwere data ahụ, wee dezie ya nke ọma, anyị nwere ike ịmepụta tebụl dị ike.
Mepụta tebụl dị mkpa
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ họrọ tebụl Ebee ka data ga-abụ akụkụ nke okpokoro na-agbanwe agbanwe, gụnyere sel ndị na-egosi anyị ụdị data ha gụnyere (na nke anyị Obodo, Onye Ọrụ, Ntugharị, Kg).
Ọzọ, anyị na-aga rịbọn wee pịa Fanye.
N'ime Fanye, pịa Tebụl na-agbanwe agbanwe na igbe nzaghachị aha Mepụta tebụl dị mkpa.
N'ime igbe a, anyị hụrụ nhọrọ abụọ:
Họrọ data ịchọrọ inyocha. Dika anyi ahoputara okpokoro anyi choro iji meputa okpokoro di omimi, o gosiputala nke ahoputara n'okpuru aha Table1. Anyị nwere ike ịgbanwe aha a ma ọ bụrụ na anyị ezube itinyekwu tebụl na otu akwụkwọ.
Họrọ ebe ịchọrọ ịtọ tebụl pivot. Ọ bụrụ na anyị achọghị ịgwakọta data iyi na tebụl dị mkpa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta mpempe akwụkwọ ọhụụ, nke anyị nwere ike ịkpọ Isiokwu Pivot, ka anyị wee ghara ịgbagwoju anya na mpempe akwụkwọ ebe data gosipụtara, nke anyị nwere ike ịkpọ data .
Ọ bụrụ na anyị emeela usoro niile, nsonaazụ ya kwesịrị ịdị ka nke dị na foto dị n'elu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị kwesịrị ị na-aga site niile nzọụkwụ ọzọ. Na ogwe aka nri (ogwe nke anyị nwere ike ịga site na ngwa ma ọ bụ hapụ ya ka ọ na-ese n'elu mmiri) data anyị ahọrọla gosipụtara nke anyị tinye ihe nzacha anyị chọrọ.
Ntọala ndị anyị nwere ike ịhazi bụ ihe ndị a:
N'ebe a, anyị na-edebe (site na ịdọrọ mpaghara ndị dị n'elu) ubi ndị anyị chọrọ igosi na-egosi ọnụọgụ ma ọ bụ nchikota. N'ihe banyere ihe atụ, etinyela m obodo Municipality, Worker and Reference iji nwee ike ịhọrọ ọnụ ọgụgụ ntinye aka. e rechaala ere (Obodo, Onye Ọrụ na Ntuziaka) ma ọ bụ ndị ọchịchị, ndị ọrụ ma ọ bụ ntụaka.
N'ime ueskpụrụ, anyị gụnyere nchịkọta nke ederede niile erere ya. N'ihe banyere ihe atụ, 6 na-anọchite ọnụ ọgụgụ ntinye aka nke ndị ọrụ niile nke ederede niile na obodo Novelda rere.
N'akụkụ a, anyị ga-edebe mpaghara niile anyị chọrọ na-egosipụta na a adaala kọlụm usoro iji họrọ ma gosipụta nsonaazụ niile metụtara uru ahụ.
N'ihe banyere ihe atụ, anyị etinyela mpaghara Obodo ahụ na Kọlụm, ka o wee gosi anyị nchikota nke onu ogugu nke a rere na obodo niile. Ọ bụrụ na anyị ejiri ihe nzacha ahụ, nke dị n'elu, anyị nwere ike nyochachaa nsonaazụ ya, na-edobe akara aka erere na nke onye ọrụ rere ha.
Mpempe akwụkwọ ahịrị na-enye anyị ohere igosipụta nke bụ ụkpụrụ ndị ahụ egosipụta site ahịrị na ọrụ ahụ bụ otu ihe dị ka nke nwere ogidi ma na-agbanwe nghazi. Dịka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'elu, mgbe ị na-etinye mpaghara Municipality na faịlụ, a na-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ ahụ n'ahịrị ọ bụghị na ogidi.
N'akụkụ a, anyị ga-agbakwunye ubi anyị chọrọ ka anyị gosi ngụkọta. Site na ịdọrọ ngalaba Kg gaa na ngalaba ueskpụrụ, a na-ekepụta kọlụm na-akpaghị aka ebe a na-egosipụta ngụkọta ngụkọta nke obodo rere, nke bụ ntinye Ahịrị anyị gbakwunyere.
N'ime ngalaba a, anyị nwekwara Akaụntụ Akaụntụ. Ọ na-ahazi gosipụta a guo obodo ma obu ngwaahịa. Na nchikota nke KG ubi ahazi nke mere gosiputa kg. Iji gbanwee ihe anyị chọrọ ịrụ n'ụlọ n'otu n'ime mpaghara ndị guzobere, anyị ga-pịa (i) dị n'akụkụ aka nri nke ubi ahụ.
Ndụmọdụ bara uru
Ọ bụrụ n’ị meela nke a, ị nwere ike iche tebụl dị mkpa bụ ụwa dị mgbagwoju anya abaghị uru ịmetụ aka. N’aka ozo, otu i gha hu n’isiokwu a, ihe niile bu ihe nlere, nnwale na nnwale rue mgbe anyi puru igosiputa data dika anyi choro ka egosiputa.
Ọ bụrụ na ị gbakwunye ubi na ngalaba ị na-achọghị, naanị ị ga-adọpụta ya na mpempe akwụkwọ ahụ ma wepụ ya. Ebubere tebụl dị iche iche maka nnukwu data, ọ bụghị maka tebụl nke 10 0 20 ndekọ. Maka okwu ndị a, anyị nwere ike iji ihe nzacha ahụ ozugbo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Otu esi eme okpokoro pivot na Excel n'enweghi nsogbu
Etu esi agbanye ihuenyo na kọmputa Windows 10